I-Rubber Testing Machine Factory-i-China i-Rubber Testing Machine Manufacturers, ababoneleli
I-ZWM-0320 Umatshini woVavanyo wokuSebenza weRubber yokutywina iRingi
Umatshini wokuvavanya ukusebenza kwerabha ye-ZWM-0320 yirabha yokutywina isantya solawulo oluguquguqukayo, ukuhanjiswa koomatshini, kunye nohlobo lolawulo lwe-elektroniki.Isetyenziselwa uvavanyo lokusebenza lwe-skeleton yangaphakathi kunye ne-rotary shaft lip seal edibeneyo.
Ibhokisi yoVavanyo yokuguga ye-ZW-P UV
Umatshini wokuvavanya iplastiki ye-WSK-49B ilungele ukulinganisa iplastiki yerabha ekrwada, irabha eyenziwe ngeplastiki, kunye nerabha edibeneyo.
Umatshini woVavanyo lwePlastiki ye-WSK-49B
Ibhokisi yokuguga ye-KY401A
Ibhokisi yokuguga ye-KY401A isetyenziselwa uvavanyo lokuguga lwe-oxygen eshushu yerabha, iimveliso zeplastiki, izinto zokufakelwa kombane kunye nezinye izinto.
I-QCP-25 i-Pneumatic Punching Machine
Umatshini wokubetha umoya we-QCP-25 usetyenziswa ziifektri zerabha kunye neeyunithi zophando lwezenzululwazi ukugqobhoza iziqwenga zovavanyo lwerabha oluqhelekileyo kunye nezinto ezifanayo phambi kovavanyo oluqinileyo.Ulawulo lwe-pneumatic, olufanelekileyo, olukhawulezayo kunye nomsebenzi osindisa umsebenzi.
Umatshini wokungqinga usetyenziselwa ukugqobhoza iingceba zovavanyo lwerabha oluqhelekileyo phambi kovavanyo oluqinileyo lweefektri zerabha kunye neeyunithi zophando lwenzululwazi.Kwizinto ezifanayo, lo matshini unokubethelwa ngenqindi.